Laptop ပြင်ဆင်မှု နည်းလမ်းများ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Laptop ပြင်ဆင်မှု နည်းလမ်းများ
ကျွန်တော်ဒီနေ့(၂၀.၀၂.၂၀၁၀)မှာ ကျွန်တော့်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုလေးကို ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့် Laptop အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ
အခြားအခြားသော အမျိုးအစား Laptop များပါ ပါဝင်ရေးသားစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ စက်တစ်လုံတည်းကို ဖြုတ်ပြတတ်ပြလုပ်တာ ဘယ်လောက်မှကြာနိုင်မှာ
ဟိုး... နောက်ဆုံးမှာ သွားပြီး မထင်မရှားနဲ့ တိန်မြုတ်သွားမှာကို ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူး။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမများလည်း ၀ိုင်းဝန်းရေးသားပေးပါ ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သလောက်
တစ်ချားအမျိုးအစားတွေကို ဘာသာပြန်သင့်တာပြန် ကူးယူသင့်တာကူးယူပြီးတော့
[COLOR="Red"]လူသားရယ်လို့ ဖြစ်လာကတည်းက မနေ့ကထက်
Last edited by မုန်းလေး; 20-03-2010 at 05:30 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 40 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, ဇင်ယော်, တာတာ, နီထွန်းဦး, နီးနီးလေး, ရဲထက်သာ, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, အလွမ်းမင်းသား, ကောင်လေးဆိုးပေ, ကျော်ထက်ချိန်, ခေါက်ရောင်းသား, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, aungkohtat, aungphyo, AZM, bonge, htun30, joe1111980, kokomaung.ko28, KznT, Lwin Thu, muanthang92, myatmin86, nainglynn, nandarnaing007@gmail.com, pannuko, phoetharlay, smooth gut, spaceboy, Thein Htike, thureinsoe, tu tu, tunpathandar, yawnathan, yelinoo
ကျွန်တော် အရင်ဆုံး RAM ချောင်း ထပ်စိုက်တာကို တင်ပါမယ်ခင်ဗျာ...
ကျွန်တော့်စက်က A300 144 ဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ချားသူတွေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ...
Toshiba A300 စီရီးတွေအားလုံးက ဒီပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့ဗျာ...
RAM ချောင်းလေးစိုက်တာပဲ ဆိုင်မှာသွားစိုက်ခိုင်းရင်ခဏလေးပဲလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးခင်ဗျာ..
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်သူတွေအတွက်ကို ပဲ ကျွန်တော် ရည်ညွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ...
ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ A300 144 က အများဆုံး 2G အထိပဲ စိုက်လို့ရပါတယ်...
အထဲမှာလဲ RAM Slot လည်း ၂ ခုပဲပါပါတယ်...
RAM ချောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ A300 144 အတွက်ကတော့ SO DIMM DDR2 (5300) 1024Mb
Samsung original ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါ။။
RAM ချောင်းကို ဘယ်လိုတပ်ဆင်မယ် ဘယ်လိုဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာကို အောက်မှာ ပုံနဲ့ ကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ် ဆက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေ။
အပေါ်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Screw သုံးခုကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပါ။ RAM ချောင်းတပ်ဆင်ဖို့ Screw သုံးလုံးသာ ဖြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ RAM ချောင်းတပ်တော့မယ်ဆိုရင် သေချာကြည့်ပါ။အလွန်အရေးကြီးပါတယ်.။
ဘေးနှစ်ဘက်ကိုသွားပြီး လက်နဲ့ကုတ်ဖဲ့ပြီး တပ်မိမှာဆိုးလို့ သတိပေးတာပါ။
အဲလိုတပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခက်ခဲတဲ့အပြင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
(၁)RAMချောင်းတပ်မယ်ဆိုရင် ပုံပါအတိုင်း 45ဒီဂရီ စောင့်ပြီး RAM Slot ထဲကိုထည့်လိုက်ပါ။
(၂)RAM Slotထဲကို ၀င်သွားတာသေချာပြီဆိုရင် အပြားလိုက်ဖိချလိုက်ပါ။
အံဝင်ခွင်ကျ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
RAM ချောင်းကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့...
ဘာမှကိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘေးနှစ်ဘက်ထိန်းထားတဲ့ အထိန်းကို အနည်းငယ်ဟ ပေးလိုက်ရုံပါပဲဗျာ...
နောက်ထပ်တင်မှာက Laptop Keyboard အသစ်ဝယ်တပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ စောင့်မျှော်အားပေးပါဦးခင်ဗျာ...
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:39 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 62 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, ဆီကျော်, တာတာ, ထွန်းအောင်ကြူ, နီထွန်းဦး, နီးနီးလေး, ဖန်ဆင်းရှင်, မဒီ, ရဲထက်သာ, ရဲရဲလေး, ရှိုင်းသော်တာမင်း, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, အလွမ်းမင်းသား, ကောင်လေးဆိုးပေ, ကျော်ထက်ချိန်, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, နောင် နောင်, မေစံပယ်ဖြူ, မောင်သံသရာ, မောင်စေတန်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, မော်ကျိုး, သော်ဇင်နိုင်, ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, AZM, azp09, bonge, Emc Arkar, g00gle, kokomaung.ko28, kozaw.dagon, KznT, Lwin Thu, myatmin86, nandarnaing007@gmail.com, pannuko, Phoekwarlay, phyomyintthein, poutsi, spaceboy, Thein Htike, thetsoeaung, thureinsoe, tinkokooo, tu tu, waihtutpai, waterpeople, winaingso, yelinoo, zawyehtut, zawzaw167, Zin Ko, zin min aung
Laptop Keyboard အသစ်တပ်ဆင်မည်။
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Keyboard အသစ်တပ်ဆင်ချင်းအပိုင်းကိုရေးသားတင်ပြပေးပါမယ်ဗျာ။
ပုံတွေကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ပြီးတစ်ခုချင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးပါ့မယ်။
ကီးဘုတ်အသစ်တပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုပြင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သတိထားရမယ်အချက်တွေကို
(၁) ဘတ်ထရီအောက်မှ Screw သုံးလုံးဟာ ဖိုင်ဘာပေါ်ဆွဲထားချင်းဖြစ်သောကြောင့်အရမ်းကြပ်ပါက
(၂) ကီးဘုတ်ပေါ်မှဖိုင်ဘာပြားကိုခွာရာတွင်ချောမွေ့သော သံပြားကိုသာသုံးသင့်ပါတယ်။
(၁) ဘက်ထရီကို အရင်ဆုံးဖြုတ်ပြီး ဘက်ထရီအောက်မှ screw သုံးလုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
Laptop တွင်ဘယ်အရာကိုပဲ ဖြုတ်ဖြုတ်ဘက်ထရီကို အရင်ဆုံးဖြုတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
(၂)ကီးဘုတ်ပေါ်မှ ဖိုင်ဘာပြားအား ခွာရန် F1 ကီးကို နှိပ်ပြီး ချောမွေ့သော သံပြားဖြင့် အသာလေးကွေးပြီး
ESC အပေါ်ဘက်အနားရှိ ကလစ်လေး လွတ်အောင် ကွေးပြီးထုတ်လိုက်ပါ။အောက်တွင်ပြထားသော
(၃)F1 အပေါ်ဘက်ရှိ screw ကိုဖြုတ်ပြီး ကီးဘုတ်ကို အသာအယာမပြီး ပလက်လှန်လိုက်ပါ။
အောက်တွင် ကြိုးပြား ရှိသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။
(၄) ကီးဘုတ်ကို ပလက်လှန်ပြီးသောအခါ မာသာဘုတ်နှင့်ဆက်ထားသောကြိုးကို ဖြုတ်ရန် မားသားဘုတ် Slot
တွင် ဖိထားသော အနက်ရောင် အပြားလေးကို အပေါ်ဘက်သို့ လှန်လိုက်ပြီး Cable ကြိုးကို အသာအယာ
(၁) ကီးဘုတ်ကိုပလပ်လှန်ပြီး Cable ကြိုးကို စနစ်တကျ အံဝင်အောင် အသာအယာထိုးပြီး အပေါ်မှအမဲပြားလေးကို ဖိချလိုက်ပါ။
(၂)Cable ကြိုးတပ်ပြီးမှ ကီးဘုတ်ကို မူရင်းပုံစံအတိုင်းမှောက်ချလိုက်ပြီး F1 အပေါ်ဘက်ရှိ Screw ကိုတပ်လိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတော့ မိမိဖြုတ်စဉ်ကအတိုင်း ပြန်တပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော် hard disk drive တပ်နည်းကို ရေးသားပါမယ်ခင်ဗျာ။
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:36 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 61 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, ဇင်ယော်, ညိုမင်းလူ, နီထွန်းဦး, မဒီ, မိုးကျော်ခမ်း, ရဲထက်သာ, ရဲရဲလေး, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, ဟိန်းထက်ဇော်၅၂, အလွမ်းမင်းသား, ကျော်ထက်ချိန်, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, တောကကို၇င်, နောင် နောင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, မော်ကျိုး, အောင်အောင်ဇော်, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, aungchanmyae, aungphyo, azp09, bonge, Emc Arkar, joe1111980, kingofvirus, kokomaung.ko28, kozaw.dagon, kyaukphyu, KznT, Lwin Thu, moe_poung, myatmin86, pannuko, Phoekwarlay, phyomyintthein, PyaitSone, saiwaihin, sawlinux, spaceboy, stability09, Thein Htike, thetsoeaung, thureinsoe, tu tu, whiteman, winaingso, winntun, yelinoo, zawyehtut, zawzaw167, Zin Ko, zin min aung
ပြန်စာ - Laptop များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်...မƞ
ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ တကူးတက အများသိအောင် တင်ပြထားတဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...နောက်လည်း သူငယ်ချင်းရဲ့ မျှဝေမှု့ ကို စောင့်မျှော်အားပေးနေပါအုံးမယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ အောင်အောင်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိကိ, ကိုသီလ, မုန်းလေး, ရဲရဲလေး, ဝင်းကျော်ဦး, အလွမ်းမင်းသား, ခေါက်ရောင်းသား, တောကကို၇င်, Thein Htike
Hdd ကို အသစ်လဲမယ်။
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Hard disk drive ကို အသစ်လှဲလှယ်ပုံကို ဆက်ပြီးရှင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော့်လက်ဆွဲတော်ကြီးနဲ့ပဲပုံတွေနဲ့တစ်ကွ ရှင်းပြပေမယ့်လည်း Laptop အားလုံးအတွက်
အရင်ဆုံး HDD တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် မိမိစက်မှာ အသုံးပြုနေတာက
IDE လား SATA လားဆိုတာကို အရင်ဆုံး သိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ HDD တစ်လုံးဝယ်ဖို့ အဲဒိတစ်ခုပဲတူညီဖို့လိုအပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ HDD နဲ့ရှင်းပြပါမယ်။အချက်အလက်ကို အောက်မှာကြည့်ပါ...
Capacity တူဖို့မလိုအပ်ပါဘူး ...capacity များရင် Stroe လုပ်ဖို့နေရာများမယ်။ပိုက်ဆံပိုကုန်မယ်။
drive rotation များမယ်ဆိုရင် Data တွေကို read,write လုပ်တဲ့အချိန်ကိုတိုတောင်းစေတယ်...
လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင် စက်ကိုမြန်စေတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒိအတွက် များလေကောင်းလေပါပဲ တူစရာမလိုပါဘူဗျာ။
HDD ဖြုတ်ချင်းအပိုင်းကိုတော့ အောက်မှာ ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်။
စက်အတွင်းပိုင်း ဂျီးတွေကို ဆေးထုတ်ချင်းအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:33 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 53 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချယ်ရီမင်း, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဇင်ယော်, နီထွန်းဦး, မဒီ, မျိုးဇင်, ရဲထက်သာ, ရဲရဲလေး, သက်နိုင်, အလွမ်းမင်းသား, ကျော်ထက်ချိန်, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, တောကကို၇င်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်အောင်ဇော်, နိုးတူး, aungphyo, azp09, bonge, Emc Arkar, joe1111980, ko sai, kokomaung.ko28, kyawswarl, KznT, minthike, moe_poung, myatmin86, Myo Min Zaw, nightman, Phoekwarlay, phyomyintthein, PyaitSone, sawlinux, sky4ster, spaceboy, Thein Htike, thetsoeaung, thura.it, thureinsoe, tu tu, winntun, yawnathan, yelinoo, zawyehtut, zin min aung
ကောင်းတယ်ဗျာ စောင့်မျော်အားပေးလျက်ပါ လက်တော့သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ tools တွေကို မတွေ့၇ဘူးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ sky4ster အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မခင်သူဇာအောင်, မုန်းလေး, ရဲရဲလေး, မောင်သံသရာ, အောင်အောင်ဇော်, thura.it
16-02-2010, 05:19 AM
sky4ster ရေစောင့်မျှော်အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
service center မှာတော့ Screwdriver(tools) တွေအများကြီး သုံးရင်သုံးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့် Laptop ကိုတော့ Screwdriver(tools) ၂ခုတည်းနဲ့ပဲ အပြီးအစီးဖြုတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Last edited by မုန်းလေး; 16-02-2010 at 07:29 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, နီးနီးလေး, ရဲရဲလေး, အလွမ်းမင်းသား, မောင်သံသရာ, အောင်အောင်ဇော်, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, bonge, minthike, myatmin86, sky4ster, spaceboy, Thein Htike, thura.it, thureinsoe, zin min aung
Laptop မှာဘာလို့ Cooler fan လိုအပ်တာလဲ?
ကျွန်တော် Laptop အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုတာကို
ဘယ်လို နည်းတွေနဲ့ရေးရင်ကောင်မလဲလို့ စဉ်းစားနေတုန်း ဒီပို့လေးကို ကြားဖြတ်လေးတင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Laptop ကို ခဏတာ အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ Cooler FAN မလိုအပ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့လို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြု သူတွေအတွက် ရေသားရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Laptop မှာ Cooler fan ဘာလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ဒီတိုင်းလေး လိုအပ်လို့လိုတယ်ကွာဆိုပြီး
အဲဒါကို လိုအပ်ပုံလေးကို သိပြီးသွားရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်မိလို့ ရေးသားလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အရင်ဆုံး Laptop အပြင်ပိုင်းလေးကို အောက်မှာကြည့်ပါ..
အပေါ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သိနိုင်ပါတယ်။ Fan က တစ်လုံးတည်းပဲရှိပါတယ်...
လက်တဲ့ Laptop တစ်ပြင်လုံးမှာ အပေါက်လေးတွေဖောက်ပေးထားပါတယ်..
Cooler fun ကို ၀ယ်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ Laptop ကို လေ၀င်လေထွက်လေး ကောင်းအောင်
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ပုံလို တစ်ခုခုလေး အောက်မှာခံပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Laptop အတွင်းပိုင်းလေးကို တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
Fan ရဲ့ အအေးဓါတ်ပေးမှုနဲ့လုံလောက်မှုရှီနိုင်မလားဆိုတာကို အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံကို ကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ Laptop CPU cooler fan က ဘယ်လိုလေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပါ
သိထားမယ်ဆိုရင်ပိုပြီး အသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်...အောက်မှာဖေါ်ပြထားသော ပုံကို ကြည့်ပါ။
Laptop ရဲ့တစ်လုံးတည်းသော Cooler fan က Processor နဲ့ VGA ကို
ကျွန်တော့တင်ပြချက်ဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးနဲ့တင်ပြတဲ့အတွက် အားနည်းချက်တွေ
ရှိနေမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ပိုပြီးသိတတ်သောသူများ အမှားများ လိုအပ်ချက်များကို
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:29 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 45 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ကိုသီလ, ချယ်ရီမင်း, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဇင်ယော်, နီထွန်းဦး, မဒီ, မိုးကျော်ခမ်း, ရဲရဲလေး, သက်နိုင်, ဟိန်းထက်ဇော်၅၂, အလွမ်းမင်းသား, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်အောင်ဇော်, academy, aungzawlin, azp09, bonge, Emc Arkar, joe1111980, kingofvirus, kyawswarl, KznT, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, Phoekwarlay, phyomyintthein, PyaitSone, spaceboy, stability09, Thein Htike, thetsoeaung, thura.it, thureinsoe, tu tu, wahgyi, yelinoo, zawyehtut, zin min aung
ဖုံတွေတက်ပြီး စက်အရမ်းပူနေမယ်ဆိုရင် ဘ
ကျွန်တော် ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ အပိုင်းလေးသုံးပိုင်းနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးပါ့မယ်။
အပိုင်းသုံးပိုင်းထဲက အပိုင်း(၁)ရေးသားချင်းဟာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့
မထင်စေချင်ဘူး။မယုံရင် ကိုယ်တိုင်းစမ်းသပ်ပြီး ပြန်စာအဖြစ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၁) Laptopကိုလည်းမဖြုတ်ရဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ Laptop အသုံးပြုသူတွေအတွက်
(၂) Laptopကို တစ်စချင်းစီမဖြုတ်ရဲသော Laptop user တွေအတွက်
(၃) Laptopကို တစ်စချင်းဖြုတ်ပြီး ဂျေးများကို သန့်ှရှင်းလိုသူများအတွက်
ဒီနည်းကို ကျွန်တော့်အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောပြတာပါ။ ကျွန်တော်လည်း အရင် စက်မဖြုတ်ရဲတဲ့
အဲဒါကို ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စက်ဖြုတ်ရင်း သေချာစီစစ်လိုက်တော့ တစ်ကယ်ကိုဖြစ်နိုင်လို့ ညီအစ်ကိုများကို
တတ်ကြလို့ ရှင်းပြနေချင်းဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း(၁)ကို လူတွေလက်ခံအောင်အရင်ဆုံး
CPU cooler fan ဘယ်လိုအလုပ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။
CPU cooler fan က Laptop တစ်လုံးလုံးမှာရှိတဲ့ အပူတွေ(ဖုန်တွေ)ကိုအပြင်ကို မှုတ်ထုတ်ပေးပါတာ။
အပေါ်မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာလည်း ရှင်းပြပြီးသားပါ။ Laptop တစ်လုံးလုံးမှာရှိတဲ့
အပေါက်လေးတွေကနေ လေတွေဝင်ပါတယ်(ဖုံတွေပါပါလာပါတယ်) အဲဒါတွေကို အပြင်ကို
လေပူတွေ (ဖုန်တွေ) ထွက်သွားအောင် မှုတ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ(၂) ကိုကြည့်ပါ ဖုန်တွေက အဲဒိလိုအပြင်ကိုလည်း မထွက်နိုင်ပဲ ဇကာနဲ့Fan ကြားမှာ ကြာလာရင် အချပ်လိုက်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။အဲလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ နှစ်တွေကြာမှပါ Laptop ၀ယ်ပြီး ၂ နှစ်အောက်
အနီရောင်ဝိုင်းထားတဲ့ နေရာကနေပြီးတော့ ပါးစပ်နဲ့ အသက်အောင့်ပြီးမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါ။အောက်မှာအနီရောင်ဝိုင်းထားသောနေရမှ ဖုံတွေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲလို နှစ်ခါသုံးခါလောက်မှုတ်ပြီး Laptop အောက်ကနေတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ အနီရောင်ဝိုင်းထားတဲ့
၀ယ်ပြီး ၁ နှစ် ၊ ၂ နှစ် လာက်ပဲရှိသေးတဲ့ လက်တော့တွေအတွက် အဲလောက်နဲ့လုံလောက်ပါတယ်။
အပူချိန်လုံးဝ သိသိသာသာ လျှော့ကျသွားမယ်ဆိုတာ လုံးဝအာမခံပါတယ်ခင်ဗျာ။
အပိုင်း(၂)ကို တစ်ခါတည်း ဆက်လက်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
အပိုင်း(၂)ကတော့ air duster ကိုအသုံးပြုချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ကီးဘုတ်ဖြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို သေချာပြန်ဖတ်ပြီး ကီဘုတ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။
အဲလောက်ဖြုတ်တာကတော့ Laptop ကိုပျက်စေလောက်တဲ့အပိုင်းလုံးဝမပါသေးပါဘူး။
ကီးဘုတ်ဖြုတ်ပြီး အောက်မှာ အနီဝိုင်းထားတဲ့နေရာမှ air duster ကိုအသုံးပြုတ်ပြီး
ကတော့ အဲဒိနည်းကိုပဲအသုံးပြုပြီး ဂျီးဆေးပေးတတ်ကြပါတယ်။အဲလို ဂျီးဆေးချင်းဟာလည်း
၀ယ်ပြီး ၃ နှစ်အောက် လောက်ပဲ သင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သုံးနှစ်လောက်ဆိုရင် Processor နဲ့ Video Card မှာ ကပ်ထားတဲ့
Processor ကော်(Thermal grease) တွေဟာ အဲဒီလောက်ဆို ခြောက်သွားတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
၄ နှစ်လောက်ရှိတဲ့ စက်တစ်လုံးကတော့ မလွဲမသွေ အပိုင်း(၃)ကိုလုပ်သင့်တယ်လို့
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီပို့စ်ကိုတော့ အပိုင်း(၂)နဲ့ရပ်လိုက်ပါတော့မယ် အရမ်းရှည်နေတဲ့အတွက်ပါ။
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:26 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 36 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ကိုသီလ, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မဒီ, ရဲရဲလေး, ကောင်လေးဆိုးပေ, ဇော်ရဲပိုင်, နောင်ထွန်း, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်အောင်ဇော်, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, azp09, bonge, Emc Arkar, frogfish, g00gle, joe1111980, KznT, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, nandarnaing007@gmail.com, nweni1972, Phoekwarlay, phyomyintthein, stability09, Thein Htike, thetsoeaung, thureinsoe, tu tu, yelinoo, zawyehtut
Processor ကော်(Thermal grease) အသစ်ထည့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့အပိုင်း(၃) ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။
(၁) Screw တွေကိုပြန်တပ်တော့မယ်ဆိုရင် နံပါတ်တွေ နေရာတွေ မမှားပါစေနဲ့။
(၂)ပြီးရင် Motherboard ,RAM စတာတွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ စည်းစနစ်တကျရှိပါစေ။
(၃) Screw driver ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ စနစ်တကျရှိပါစေ။ချော်မထိုးမိပါစေနှင့်။
(၄) Cable ကြိုးများကို ဖြုတ်တဲ့အခါ နည်းစနစ်တကျရှိပါစေ အတင်းဆွဲမဖြုတ်ပါနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး ကီးဘုတ်ဖြုတ်တဲ့အဆင့်ကိုကြေညပ်နေမှ ဒီအဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁)အရင်ဆုံး ဘထ္တရီကိုဖြုတ်ပါ ဘထ္တရီအောက်ခြေရှိ Screw ၅ လုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ကီဘုတ်ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာ ပြပြီး။
(၂) RAM ချောင်းကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။(အပေါ်မှာရှင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်)
Ram ကိုဖြုတ်ပြီး အောက်မှာပြထားသောပုံအတိုင်း Screw ကိုထပ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။
(၄) HDD ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ HDD အတွင်းတွင်ရှိသော Screw ကိုထပ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ အပေါ်တွင်တင်ပြပြီး။
(၅) HDD အပိုဘက်ခြမ်း အဖုံးကိုဖြုတ်ပါ။
ပြီးရင်အောက်တွင်ပြထားသောပုံအတိုင်း Screw များကို ဖြုတ်ပါ။
(၆) အဆင့်ခြောက်အနေနဲ့ကတော့ Laptop အောက်ဘက်ချမ်းတွင် ပါရှိသော Screw များကို
(၇) Screw များကို ဖြုတ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင် Laptop ကို အနည်းငယ် လှုပ်ပေးပါ။
Screw များကုန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ကပ်ထားသော အံများ ကြွတတ်လာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) ကီဘုတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ (ကီးဘုတ်ဖြုတ်ရန်မှာရှင်းပြီး)
(၁၀) ကီးဘုတ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း Screw များ
Cable များကို စနစ်တကျဖြုတ်ပေးပါ။ ပုံနှစ်ပုံပြထားပါတယ် အတူတူပါပဲ။
(၁၁) Screw များ Cable များကို ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Touch Pad ပါသော အပေါ်ခွံကို
(၁၂) DVD Drive ကို အသာအယာဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ ဘာကြိုးမှမပါပါဘူး။
DVD Drive ကိုဖြုတ်ပြီးသွားရင် မားသာဘုတ်ကို အောက်မှလာပြီး Socket ထဲကိုဝင်တဲ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းရှိပါတယ်။ဖြုတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
(၁၃) Motherboard ကိုဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Screw များ
Cable များကို စနစ်တကျဖြုတ်ပါ။ကျွန်တော်က သိပြီးသားမို့လို့လွယ်သွားတာပါ
ကျွန်တော်စဖြုတ်တုန်းက Screw တွေအများကြီးကနေ ဘယ်ဟာကို ဖြုတ်ရမလဲဆိုပြီး
မနည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။အောက်က ပုံကို သေချာကြည့်ပြီး စနစ်တကျကြိုးများကိုမှတ်သား
(၁၄) ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Mother Board ကို အသာအယာလေး မပြီး တစ်ခုခုပေါ်တင်ပြီး ပလက်လှန်လိုက်ပါ။
အဲဒိအချိန်မှာ ကြိုးတစ်ချောင်းကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ မဖြုတ်ဘူး
(၁၅) Cooler Fun မှ Screw မျာကိုဖြုတ်ပါ။ဖုန်များကိုသေချာဆေးကြောပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဖုန်းများကိုမဆေးကြောခင် Processor နဲ့ Video မှာကပ်နေသော
Processor ကော်(Thermal grease)များကို လေနဲ့တွေ့ပြီး မခြောက်ခင်သုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
(၁၆) ပြန်လည်တပ်ဆင်ချင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။Processor ကော်(Thermal grease)
ကို များများထည့်ပေးပါ။မူးရင်းသူထည့်ပေးထားတာလဲ အများကြီးပါပဲ။
သင်ဟာ ဘယ်အမျိုးအစား Laptop ကိုမဆို စာအနည်းငယ်ဖတ်ပြီး ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုတာ
မှတ်ချက်။ ။ Guarantee ရှိပြီးသောသူများ Service Center သို့သွားရောက်ပြီး
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ရယူပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ဖြုတ်လိုက်လို့
အခြေအနေလေးတစ်ခု ပျက်နေတာနဲ့ သူတို့က စဉ်းစားပေးချင်းမရှိတတ်လို့ပါ။
ကျွန်တော်နောက်ထပ် တင်ပြစရာက ကျွန်တော့်မှာ Laptop တစ်ခြားအမျိုးအစား
အဲဒိအတွက် ဘာသာပြန်လေးတွေ။ Laptop နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:21 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 39 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုသီလ, ချယ်ရီမင်း, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မဒီ, ရဲရဲလေး, သက်နိုင်, အလွမ်းမင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်အောင်ဇော်, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, azp09, bonge, g00gle, joe1111980, kozaw.dagon, kyaukphyu, KznT, minthike, mmkyioo, myatmin86, Myo Min Zaw, nandarnaing007@gmail.com, nweni1972, phyomyintthein, sky4ster, stability09, thetsoeaung, tu tu, wahgyi, winntun, yelinoo, zawyehtut
20-02-2010, 08:45 AM
DVD Drive ကိုအသစ်လဲတပ်ဆင်မယ်။
ကျွန်တော် Toshiba A300 series နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မနေ့က နောက်ဆုံးဆိုပြီးရေးသားလိုက်တယ်။
အဲဒါတွေအားလုံးကိုလည်း PDF နဲ့စာအုပ်လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားနေပါတယ်။
စာအုပ်လေးလုပ်ဖို့ခေါင်းစဉ်တွေကို လိုက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်။
ငါ DVD Drive ပျက်သွားရင် ဘယ်လိုဖြုတ်မယ်တပ်မယ်ဆိုတာကို မရေးခဲ့ရသေးပါ့လားလို့
သတိရသွားလို့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးသားချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အရင်ဆုံးကတော့ ကျွန်တော်ရေးနေကျပုံစံလေးအတိုင်း ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြသနာများအကြောင်းပေါ့။
DVD Drive ဖြုတ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြသနာလုံးဝကိုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ Save ဖြစ်အောင်လို့ အရေးမကြီးတာလေး တစ်ခုကို ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တောင်
(၁) ဘက္ထရီကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ RAM Cover အဖုံးကိုလည်း ဖွင့်လိုက်ပါ။
(၂) အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံပါအတိုင်း Screw တစ်လုံးတည်းကိုပဲဖြုတ်မယ်ဆိုရင်
DVD Drive ဖြုတ်ဖို့လုံလောက်ပါပြီချင်ဗျာ။
(၃) Screw ဖြုတ်ပြီး အစွန်းထွက်နေသော သံပြား( Screw ထိန်း) လေးကို အပြင်ဘက်သို့
(၄) အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း အားလုံးပြီးဆီးသွားပြီး ။ ပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
DVD Drive ဖြုတ်ချင်းတပ်ချင်းအပိုင်းလေးပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။
မှတ်ချက်။ ။ လူတွေက တစ်ယောက်တစ်မျိုးရူးနေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်လည်း
အပေါ်မှာရေးပြီးသမျှ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဆရာကြီးလေသံနဲ့ အရူးထပြီး PDF လေးတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှ Connection မကောင်းလို့ တိုက်ရိုက်မကြည့်နိုင်သူတွေအတွက်နှင့်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အင်တာနက်ကို ကိုယ်ပိုင်မသုံးနိုင်သူတွေအတွက် အမြဲတမ်းဖတ်ရှုလို့ရစေရန် အတွက်ပါ။ပြီးသွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော် E-Books & Tutorials ဆိုတဲ့နေရာရယ် ဒီနေရာရယ်မှာ
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:17 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 32 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဆီကျော်, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, မဒီ, ရဲရဲလေး, သက်နိုင်, ဟိန်းထက်ဇော်၅၂, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်အောင်ဇော်, ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, bonge, Emc Arkar, joe1111980, kyaukphyu, KznT, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, nweni1972, phyomyintthein, sky4ster, stability09, tu tu, wahgyi, yelinoo, zawyehtut
ဒီနေရာလေးမှာ လက်ပ်တော့နဲ့ ပတ်သတ်တာလေးဆွေးနွေးနေလို့ ..ကျွန်တော်လည်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို တစ်ခုလောက် သတိပေးချင်ပါတယ်....ဘာလဲဆိုတော့ လက်ပ်တော့ အသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ ပါဝါကြိုးနဲ့ တွဲသုံးပေမယ့်လည်း ဘတ္ထရီတုံးကို တော်တော်များများတပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုကြပါတယ်...အဲဒီလို ပါဝါ နဲ့ အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ ဘတ္ထရီတုံးတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဘတ္ထရီလောင်ကျွမ်းမှု့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်.....ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ပ်တော့မှာ ဘထ္ထရီက အထဲမှာလောင်ပြီးတော့ ၀င်းဒိုးမတက်တာမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်...အစကတော့ အဲဒီဘတ္ထီကြောင့်လို့ မထင်ပါဘူး..တစ်ခြား error တစ်ခုကြောင့်ပဲထင်ပြီးတော့ တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှာပါတယ်....ဘယ်လိုမှမတွေ့ ပါဘူး..အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ဘတ္ထ၇ီတုံးကို ဖြုတ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်..အဲဒီတော့မှ စက်က နဂိုအတိုင်း ပြန်လည်ပတ်လာပါတယ်..အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများကို ပါဝါနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် ဘတ္ထရီတုံးကို ဖြုတ်ထားဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်....အဲလို error မျိုးကလည်း တော်တော်တော့ရှားပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.... ဖြုတ်ထားလိုက်ရင်အန္တရယ်ပိုကင်းတာပေါ့...အတွေ့ အကြုံလေးတစ်ခု မျှဝေပေးတာပါ....အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ အောင်အောင်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ချယ်ရီမင်း, စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, မုန်းလေး, မွန်ကြီး, ရဲရဲလေး, ဟိန်းထက်ဇော်၅၂, အလွမ်းမင်းသား, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ငြိမ်းချမ်း, azp09, bonge, Emc Arkar, kingofvirus, kozaw.dagon, lusoelay987, minthike, phyomyintthein, yelinoo, zawyehtut
How to charge mobiles with Laptop?
ခေါင်းစဉ်းလေးကတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Laptop Hardware Support နဲ့
အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ဆွေးနွေးလိုက်တာပါ။
ဒါလေးကို မသိတဲ့သူလည်း တော်တော်များပါသေးတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတော်တော်များများက Laptop တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်
Processor ၊ VGA ၊ RAM ဒီလောက်ကိုပဲမက်မောတတ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အကြောင်းအရာလေးကို မရေးခင် စဉ်းစားမှုလေးတွေလွဲနေတာကို ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်။
Laptop ဟာ Portable ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လှပမှု ၊ ကြံ့ခိုင်မှု ၊ အချိန်အများကြီးအသုံးပြုနိုင်မှု ၊
Function တော်တော်များများကိုလုပ်ပေးနိုင်မှု တို့ကိုပဲကြည့်ပြီး ၀ယ်သင့်ပါတယ်။
Processor ၊ VGA ၊ RAM ကို အတော်အသင့်လေးကြည့်ပြီး မိမိလုပ်မယ့် အလုပ်နဲ့အဆင်ပြေတာကိုပဲ
ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။။ Laptop တစ်လုံးကို ထုတ်ကတည်းက ထုတ်တဲ့ Company က အမျိုးအစားခွဲခြားပြီး ထုတ်တယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်တယ်။အဲဒါမှ ကိုယ်သုံးချင်တာနဲ့ သူထုတ်တဲ့ အမျိုးအစားကိုတွဲမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သေချာသိရှိလိုပါက အောက်မှာပြထားတဲ့လင့်ကို သွားပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်စကားအရမ်းရှည်တာပဲဗျာနော် ။ လိုရင်းကိုအောက်မှာ စပြီးရှင်းပါပြီခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူသည် အရင် ဆုံး မိမိ Laptop မှာ USB sleep and charge port
ပါလားမပါဘူးလားဆိုတာကို အသုံးပြုသူလက်ဆွဲမှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Toshiba Laptop တွေမှာတော့
ကျွန်တော်အောက်က ပြထားတဲ့ ပုံပါအတိုင်း လျှက်စစ် သက်ေတလေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။
USB sleep and charge port ဆိုတာကတော့ USB ပေါက်ကနေ 3rd party products (USB charger)
ကို အသုံးမပြုပဲနှင့် ဘယ် Mobiles မဆို Portable Player တွေကို မဆို Data ကူယူတဲ့ USB ပေါက်ကနေ
အားသွင်းပေးနိုင်သော Laptop Function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Sleep ဆိုတဲ့ စကားလုံးကလည်း
အလကားထည့်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး Laptop Sleep ဖြစ်နေရင်တောင်မှ အားသွင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့
USB charge port ကို အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ Laptop အမျိုးအစားနဲ့သက်ဆိုင်မယ့်
Software ကို မူးရင်းဆိုက်မှာသွားပြီး Download ချ Install လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ Toshiba တွေအတွင်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
Toshiba တွေအတွက်ကတော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ မူးရင်းဆိုက်ကနေပြီးတော့ Hardware Setup ကို
Download ချပြီး Install လုပ်ထားပါ။ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့လင့်က Eu Standard Laptop တွေအတွက်ပါ ။
သင့် Laptop အမျိုးအစားအတွက် မပါလာဘူးဆိုရင် ။ မိမိဝယ်ယူတဲ့ နိုင်ငံအခြေပြုဝက်ဆိုက်မှာ သွားကြည့်ပါ။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိတော့ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံပါအချက်အလက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Hardware setup ကို Install လုပ်ပြီး စဖွင့်လိုက်ရင် Disabled ဖြစ်နေပါ့လိမ့်မယ်(အပေါ်ပုံကိုကြည့်ရန်)။
Mobile ဒါမှမဟုတ် Portable Player တစ်ခုခုကို အားသွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အရင်ဆုံး Mode -1 နဲ့ အသုံးပြုပါ။ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ မှ Mode -2 ကိုရွေးချယ်ပါ။
အားသွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Disabled ပြန်ပေးပြီးပိတ်ထားလိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ တစ်ချို့ Mobiles တွေကို USB sleep and charge System က အလုပ်လုပ်သော်လည်း အားသွင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ မူရင်းဆိုက်မှာရေးထားပါတယ်။
အပေါ်က မှတ်ချက်က မှန်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ခုကြုံတွေ့ရတာလေးကိုပြောမယ်နော်။
ကျွန်တော့်ဖုံးက Nokia5800 ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒိဖုံးက ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကိုတပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် သူက မေးခွန်းလေးခုမေးပါတယ်။
(၁) PC Suite
(2) Mass storage
(3) image transfer
(4) media tramsfer
ဆိုပြီးမေးပါတယ်။ အားသွင်းမလားလို့ သူက မမေးပါဘူး။ အဲဒိအတွက်မရတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့
ကျွန်တော်တစ်ချားအမျိုးအစား ဖုံးတွေကို ယူပြီးစမ်းကြည့်တယ် အားသွင်းလို့ရပါတယ်။
အဲဒိအတွက် ကျွန်တော် အသိတစ်ခုရသွားတယ် USB Transfer Save အရမ်းဖြစ်တဲ့ ဖုံးအမျိုးအစားတွေ
(ယခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ Touch ဖုံးတွေ အားသွင်းလို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။)
Nokia5800 အတွက်ကတော့ အောက်ကလင့်မှာ ပြထားတဲ့
3rd party products (USB charger) ကိုအသုံးပြုပြီး
(မည်သည့်အမျိုးအစားး Laptopမဆို )အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ပို့စ်အရမ်းရှည်သွားတဲ့အတွက် နားလည်းပေးကြပါခင်ဗျာ။ အယူအဆမှားတာလေးတွေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးကြပါ။
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:12 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 25 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချယ်ရီမင်း, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, ရဲရဲလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်မိုးထွန်း, အောင်အောင်ဇော်, ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, azp09, bonge, joe1111980, KznT, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, novembergirl, phyomyintthein, Thein Htike, yelinoo
ကျွန်တော် အပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာတွေကို အမှားတွေအားလုံးနီးပါးကို ပြုပြင်ပြီးတော့ စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော အင်တာနက်ကို အမြဲမသုံးနိုင်သူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
(1) Toshiba A300 Series
(2) How to add RAM?
(3) How to change DVD Drive ?
(4) How to repair Keyboard ?
(5) How to add Dual HDD?
(6) Why your Laptops need Cooler Fan?
(7)How to clean inside your Laptops ?
(8) How to charge Mobile with your Laptops?
အောက်ပါအသင်းဝင် 28 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မင်းဆွေအိမွန်, မွန်ကြီး, ရဲရဲလေး, ဇော်ရဲပိုင်, အောင်မိုးထွန်း, ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, aungphyo, azp09, bonge, comic_, htaynaingwin, kingofvirus, KznT, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, phyomyintthein, stability09, thurein, tu tu, wahgyi, Zin Ko
25-02-2010, 02:50 PM
ifile.it ကနေပြန်တင်ပေးလို့ရမလားအကို ကျွန်တော့်ဆီမှာက mediafire ကနေဒေါင်းလို့မရလို့ပါ..ဖြစ်နိုင်ရင်ပြန်တင်ပေးပါအုံးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ စိုင်းနေဇင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မုန်းလေးရေ.. သူငယ်ချင်း မင်းအစား ငါအိုင်ဖိုင်ကနေ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, စစ်တွေသားချေ, ဇင်ယော်, နီထွန်းဦး, မင်းဆွေအိမွန်, မုန်းလေး, ရဲရဲလေး, အလွမ်းမင်းသား, ငြိမ်းချမ်း, bonge, thurein, yelinoo
27-02-2010, 12:59 PM
How to add Webcam to the Dell ?
ကျွန်တော် ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကိုရှာပြီးတင်ပေးပါ့မယ်လို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါ။
ယခု တင်ပေးမဲ့ Tutorials လေးကအရမ်းကောင်းပါတယ်။
Dell Inspirons 1525 နဲ့ Vostro 1500 အမျိုးအစားတွေမှာ လုံးဝအသစ်ကို ၀ယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
Webcam မပါ ပါဘူးခင်ဗျာ။
အဲဒိအတွက် မိမိ Laptop ကို Webcam Portable ကြီးနဲ့သုံးရတာလဲ မျက်နှာပန်းမလှပါဘူး။
အဲဒိအတွက် မူရင်း Webcam တွေလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Webcam ကို ၀ယ်တပ်မယ်ဆိုရင်
အောက်မှာပေးထားတဲ့ Tutorial လေးကို မဖြစ်မနေဖတ်ပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံမှအသုံးပြုသူတွေအတွက် အပေါ်ကလင့်ကိုဝင်လို့မရဘူးဆိုရင် ။
အောက်မှာ Offline Browser နဲ့ကြည့်နိုင်အောင် ဒေါင်းလုပ်ချပေးလိုက်ပါတယ်။
2.10 Mb ပဲ၇ှိပါတယ်အလွယ်တစ်ကူဒေါင်းလုပ်ချပြီး Offline Browser နဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 22 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ချယ်ရီမင်း, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဆွမ်းပေါင်, နီထွန်းဦး, မင်းဆွေအိမွန်, ရဲရဲလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ငြိမ်းချမ်း, bonge, joe1111980, KznT, lusoelay987, Lwin Thu, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, phyomyintthein, tu tu, yelinoo
How to add RAM in Dell Inspiron Mini 1011 Laptop?
ကျွန်တော် ဒီနေ့ တင်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Dell Inspiron Mini 1011 Laptop
တွေမှာ RAM ထပ်ပြီးစိုက်ချင်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Dell Inspiron Mini 1011 တွေမှာ RAM ချောင်းစိုက်တယ်ဆိုတာ လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲဒိအမျိုးအစားတွေမှာ RAM ချောင်းက Motherboard အောက်ဆုံးမှာ ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Motherboard အောက်ဆုံးမှာ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း Toshiba တွေလို အောက်ကနေဖြုတ်လိုက်ယုံနဲ့
လွယ်လွယ်ထပ်စိုက်လို့မရပါဘူး။ RAM ချောင်းတစ်ခါဆိုက်လိုက်တာနဲ့ စက်တစ်လုံးလုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အလွန်လည်း အန္တရာယ်များပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အောက်မှာတင်ပေးထားတဲ့ Tutorials နှစ်ခုက Resolution လည်းကောင်းတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ဆင့်ချင်းကို Screw ဘယ်နှစ်လုံးဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုပါ Pro ကျကျ ရှင်းလင်းပြသထားလို့
လုံးလောက်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။(Tutorial ကိုသေချာလုပ်ပေးတဲ့ အမည်မသိ ကျွန်တော့်
မြင်ဆရာကိုလည်း ဒီကနေ သူငယ်ချင်းများကို မျှဝေရင်း ဂါရ၀ပြု လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ)။
အောက်မှာကျွန်တော်ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ Video Tutorials နှစ်ခုက
(၁) Dell Inspiron Mini 1011 Laptop ကို အစအဆုံးဖြုတ်ခြင်း။ ( Remove RAM)
(၂) Dell Inspiron Mini 1011 Laptop ကို အစအဆုံးပြန်တပ်ခြင်း။ ( Install RAM)
မှတ်ချက်။ ။ Dell Inspiron Mini 1011 Laptop တစ်လုံးကို RAM ထပ်စိုက်တော့မယ်ဆိုရင်
Motherboard မှာ RAM Slot တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်2Gb ချောင်းကို မလွဲမသွေ ၀ယ်စိုက်ရမှာပါ။
မူရင်းဆိုက်ကို မသိတဲ့အတွက် လမ်းညွန်ချက်မပေးနိုင်တာ နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ။
Last edited by မုန်းလေး; 01-03-2010 at 04:39 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဆန်းမောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, မင်းဆွေအိမွန်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်မိုးထွန်း, ဖြိုးယံလေး, bonge, KznT, Lwin Thu, minthike, myatmin86, phyomyintthein, tu tu, yelinoo
how to remove keyboard from Dell vostro 1015 ?
ကျွန်တော့် စတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးအောက်မှာ စာမရေးနိုင်တော့လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ
သူငယ်ချင်းရဲ့ Dell vostro 1015 Laptop Screen က ပျက်သွားတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့
ပျော်တယ်ဆိုတာကိုလည်း တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ဦး ကျွန်တော်လည်း စာရေးလို့ရမယ်
ဒီနေ့ကတော့ Dell vostro 1015 မှာ Keyboard ကို ဘယ်လို တပ်ဆင်မယ် ဖြုတ်မယ်ဆိုတာကို
အရင်ဆုံးကျွန်တော် Dell vostro 1015 ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါ့မယ်။
(၁) Laptop ရဲ့ Power Button ရှိတဲ့ အပေါ်ပြားလေးရဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်ဟာ အနည်းငယ်ဟနေခြင်း။
မှတ်ချက်။ ။ ဟနေတဲ့အတွက် လူတိုင်းက အဲဒိနေရာလေးကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အမြဲ လှန်လှန်ကြည့်
တဲ့အတွက် Screw များပြုတ်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။
(၂)Screw များကို စနစ်တကျ မပြုလုပ်ထားခြင်း။
(၁)Keyboard ကိုဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဘက္ထရီကို ဖြုတ်ပါ့မယ်။
ဘက္ထရီအောက်မှ Screw နှစ်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်ပါ့မယ်။
(၂)အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံပါအတိုင်း Screw များကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
(၃)အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံပါအတိုင်း Screw နှစ်လုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
(၄) ဒီအပိုင်းကတော့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Keyboard နဲ့ Mainboard နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ Cable ကြိုးက အရမ်းကို တိုလွန်းပါတယ်။
ပုံမှာပြထားတဲ့ မျှားလေးအတိုင်း လက်နဲ့ အနည်းငယ် Screen ဘက်သို့ တွန်းလိုက်ပါ။
အဲဒိလိုတွန်းလိုက်မှ Keyboardရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ကုတ်ထားတဲ့ အစွန်းလေးက လွတ်သွားမှာပါ။
အဲဒီလို လွတ်သွားပြီဆိုရင် Keyboard ကို အနည်းငယ်ကွေးပြီး ဘေးဖက် အစွန်းတစ်ခုကို အရင်ထုတ်ပြီး အသာအယာ လှန်လိုက်ပါ။
(၅) Keyboard ကိုလှန်ပြီး အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့တဲ့ Toshiba Keyboard ဖြုတ်တဲ့ အတိုင်းပဲ
Cable အပေါ်ပြားလေးကို လှန်ပြီး ဖြုတ်လိုက်ပါ။
(၆) Keyboard ဖြုတ်ခြင်းအပိုင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။
Dell vostro 1015 Laptop မှာ Black screen တက်နေရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:08 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 24 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, မင်းဆွေအိမွန်, ရဲရဲလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်မိုးထွန်း, azp09, bonge, joe1111980, kyawkyar, KznT, Lwin Thu, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, phyomyintthein, Thein Htike, tu tu, winntun, yelinoo
Black Screen at Dell vostro 1015
ကျွန်တော်လည်း ဒီရက်ပိုင်းမှာ အချိန်မရတာနဲ့ ဆက်မရေးဖြစ်လိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒီနေ့တော့ Dell vostro 1015 ရဲ့ Black screen ပြသနာလေးကို ကျွန်တော်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံလေးကို
ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။(ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစက်ကတော့ လှုပ်လိုက်ရင် Black Screen ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပါ။)
ပြသနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို စဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Black screen ဖြစ်တိုင်းဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့တော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ပြသနာဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကို အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီး စဉ်းစားဖြေရှင်းလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစက်ကတော့ ပြသနာဖြစ်နိုင်ခြေအမှတ်(၃) မှားအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ လုပ်သင့်တာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မှ ကိုယ်ကိုင်လိုက်တဲ့ စက်တစ်လုံးက လက်ထဲကနေ
(၁) ကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ Keyboard ဖြုတ်ခြင်းအပိုင်းကို ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
(၂) ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ပြသနာဖြစ်နိုင်ခြေ အမှတ်(၁) ကို ကြည့်ပါ။
(၃) ပြသနာဖြစ်နိုင်ခြေ အမှတ်(၂) ကို သေချာလေ့လာကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
Dell Laptop တွေက လက်ရာမသေသပ်တာကြောင့် အဲဒိနေရာမှာအဖြစ်များတတ်ပါတယ်။
(၄) ဒီအဆင့်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြသနာဖြစ်နိုင်ခြေ အမှတ်(၃)ပါ။
ကျွန်တော့် Topic မှာ ပုံတွေများပြီး အရမ်းလေးနေလို့ အတတ်နိုင်ဆုံးချုံ့တင်လိုက်ပါတယ်။
အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်လာလို့ သေချာမရှင်းဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံးထပ်ကူညီပေးပါ့မယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ ဒုတိယ ပုံမှာ အနီလေးထောင့်နဲ့ဘောင်ခက်ထားတဲ့ နေရာတွေကို
Laptop LCD ကိုဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင် Screw ဖြုတ်လိုက်ယုံနဲ့ ဖြုတ်လို့မရပါဘူး။ LCD ကို နှစ်ဖက်
ညှပ်ပြီး ကုတ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် ကော်ပြားလေးနဲ့ ထိုးပြီး ရဲရဲခွာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရေးသားချက်လေးတွေကို အားပေးဖတ်ရှုနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Last edited by tu tu; 15-03-2010 at 05:04 PM..
ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, နန်းနွယ်, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, မင်းဆွေအိမွန်, ရဲရဲလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်မိုးထွန်း, azp09, bonge, chitnyimalay, g00gle, kingofvirus, KznT, Lwin Thu, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, phyomyintthein, Thein Htike, tu tu, winaingso, yelinoo
Asus X80L series မိတ်ဆက်။
ဒီနေ့ ကျွန်တော် Asus X80L series ရဲ့ Hardware ပိုင်းလေးတစ်ခုကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် Topic လေးမှာ ပုံတွေအရမ်းများပြီးတော့ ဖွင့်လို့မလွယ်တာနဲ့ အစ်မတူးတူးနဲ့ နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး သူ အကြံပေးတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော့် Topic တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ ပုံတွေကို
Clickable thumbnail နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ နိင်ငံတွေမှာအသုံးပြုသူတွေ
ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းစက်တစ်လုံးကိုပြင်ပေးပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေကို
ဒီမှာ ဆက်ပြီးရေးသားချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ မိတ်ဆက်လေးပဲ အောက်မှာပုံလေးနဲ့ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ ရေးသားချက်လေးတွေကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပ်ပေးပါဦးဗျာ။ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။
ကိုသီလ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မင်းဆွေအိမွန်, ရဲရဲလေး, အလွမ်းမင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်မိုးထွန်း, azp09, bonge, chitnyimalay, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthike, myatmin86, Myo Min Zaw, phyomyintthein, spaceboy, Thein Htike, tu tu, yelinoo
ကျွန်တော့်ကိုလဲ НР အမျိုးအစားလက်တော့အကြောင်းလေးသိရင်တစေ့တစောင်းတင်ပြပေးပါလားခင်ဗျာ>>>>>
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ရဲထက်အောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, Lwin Thu
Find More Posts by ရဲထက်အောင်
16-03-2010, 05:33 AM
ကိုရဲထက်အောင်ရေ ကျွန်တော် Asus Laptop Hardware အပိုင်းလေး ပြီးသွားရင်
HP Laptop တစ်လုံးရှာလို့ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတင်ပေးပါ့မယ်။
မရခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ရှာပြီးတင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, ရဲရဲလေး, ဇော်ရဲပိုင်, g00gle, Lwin Thu, minthike, myatmin86, Thein Htike, tu tu
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
if possible, for Acer laptop ? thanks
how i do to be clean my laptop,pls guide me!
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ aunghtutpaing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရဲရဲလေး, Lwin Thu, Thein Htike
Find More Posts by aunghtutpaing
ကိုအောင်ထွတ်ပိုင်က စီးရီးလေးပြောပေးပါ ကျွန်တော်ရှာပေးပါ့မယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခုကျွန်တော် hp လက်တော့တစ်လုံးရှာနေတာတောင်မတွေ့သေးလို့။
ကျွန်တော်က အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်တော့ ရှင်းပြချင်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကို စပွန်ဆာရှာရတယ်။
သူတို့ပေးမှ အဆင်ပြေတာ။ ကျွန်တော့်မှာက တစ်လုံးတည်းပဲရှိတာဆိုတော့။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, Lwin Thu, Thein Htike
install DVD Drive for Asus X80L series
ကျွန်တော် Asus X80L series ကိုဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ် ဖြုတ်တတ်မယ်ဆိုတာကို
ဒီနေ့စပြီး တင်ပြရှင်းလင်းပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ ဒီနေ့စပြီး တင်ပြပေးမှာကတော့ DVD Drive ကို
ဘယ်လို ဖြုတ်မယ်.၊ ပြန်တပ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Laptop ဘက္ထရီကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
(၂) ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Screw နှစ်ခုကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
ပုံနှစ်ပုံက အတူတူပါပဲ။ မြင်သာအောင် အကြီးအသေးပြထားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၃) DVD Drive ကို လက်နဲ့ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Asus X80L series မှာ DVD Drive ကိုဖြုတ်ခြင်းတပ်ခြင်းအပိုင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, azp09, bonge, Lwin Thu, minthike, Myo Min Zaw, Thein Htike, tu tu, yelinoo
19-03-2010, 02:17 PM
Maintenance and Service Guide Pavilion dv2000
Originally Posted by ရဲထက်အောင်
ကိုရဲထက်အောင်ရေ ကျွန်တော် စာအုပ်လေးတစ်အုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Maintenance and Service Guide for HP Pavilion dv2000 အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တောင်ဖတ်ပြီးအရမ်းသဘောကျနေတာ။ ကိုရဲထက်အောင်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, စိုင်းနေဇင်, ဆန်းမောင်, azp09, bonge, chitnyimalay, joe1111980, Lwin Thu, Thein Htike, tu tu, yelinoo
အကိုရေ.. Acer aspire 4736z laptop ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းအကြောင်းလေးလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် ရေးသားသင်ကြားပြသပေးပါအုံးခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ စိုင်းနေဇင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
how to remove Wireless Card and HDD ?
Laptop တွေထဲမှာ Asusကတော့ ဖြုတ်ရတာတော်တော်လွယ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ တည်ဆောက်ပုံကလည်း အပြင်မှာပဲ အကုန်လုံးကိုထားတော့ ဖြုတ်ရတဲ့လူတွေအတွက်
ဒါပေမယ့် Hardware တွေပြသနာဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တင်ပြရှင်းလင်းပေးမှာကတော့ Asus X80L series မှာ Wireless Card နဲ့ HDD ကို
ဘယ်လို ဖြုတ်မယ်တပ်မယ်ဆိုတာကို ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းလွယ်ကူတဲ့အတွက် Page လေးမှာဆိုးလို့ ကျွန်တော်ပုံတွေကို လိုသလောက်လေးပဲ
(၁) ဘက္ထရီကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
(၂) အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း Screw တွေကိုဇြုတ်လိုက်ပါ။
အနီနြဲ့ပထားတဲ့ Screw ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ HDD ကို ဒီတိုင်းဆွဲဖြုတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ။
(၃)Wireless Card ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း သတိရှိပါစေ။
Asus X80L series မှာ Wireless Card နဲ့ HDD ဖြုတ်ခြင်းအပိုင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာကတော့ Keyboard နဲ့ RAM ဖြုတ်ခြင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။ အားပေးဖတ်ရှုကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Last edited by မုန်းလေး; 20-03-2010 at 05:27 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ မုန်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, ကွက်တိ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ရဲရဲလေး, အလွမ်းမင်းသား, azp09, bonge, kingofvirus, kyaukphyu, KznT, Lwin Thu, minthike, PyaitSone, soemaung, spaceboy, Thein Htike, tu tu, winaingso, yelinoo
27-07-2010, 04:59 PM
သုံးဖြစ်တော့လည်း ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတာနဲ့ လက်တော့ အသစ်တွေဖြုတ်ထားတာ ဘယ်လိုမှ တင်လို့
အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်... တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော် တော့ပစ်လေးကို နောက်ထပ်
အသက်သွင်းနိုင်မဲ့ တစ်ယောက်လောက်တော့ ရှိမယ်ဆိုရင် ဆက်ပြီးကူညီပေးကြပါဦးဗျာ...
ကျွန်တော်လည်း ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့ တစ်နေ့ ပြန်ပြီး ကြိုးစားပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ...
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, ရဲရဲလေး, သန့်ဇင်ဌေး, အလွမ်းမင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, aungkohtat, aungphyo, azp09, bonge, htun30, KznT, Lwin Thu, minthike, nandarnaing007@gmail.com, phoetharlay, Thein Htike, tu tu, yawnathan, yelinoo
အကြိုက်ဆုံး, hardware guide, hardware howto, hardware knowledge, laptop repair
Touch Pad Driver(for laptop users) thetnaung87 ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ211-02-2012 07:56 AM
Windows XP Sp3 OEM for Laptop Collection ကျန်စစ် Windows XP 30 06-11-2011 01:55 PM
Laptop Battery Power ကို ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းလမ်း မောင်ပေါ်ဦး အထွေထွေဗဟုသုတ 8 15-05-2011 10:25 AM
Laptop ပျက်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ မောင်ပေါ်ဦး အထွေထွေဗဟုသုတ018-10-2010 11:28 AM